Ra’iisul Wasaar Khayre “Waxaa La Furayaa Jidka Isku Xira Muqdisho Iyo Baydhabo – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Nov 23, 2017
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo xalay kulan la qaatay qaar kamid ah bulshada ku dhaqan degmada Baydhabo ayaa ku baaqay iney dadku ka qeyb qaataan dagaalka lagula jiro shabaab dhulalka kooban ee ay maamullaan Koonfur Galbeed.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay in la isku furi doono wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Baydbao, si deegaanka looga saaro go’doonka. isagoo tilmaamay kooxaha shabaab dhibaatada ay wadaan darteed uu maamulku u guuri la yahay xaruntiisii Baraawe sida uu hadalka u dhigay.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa sheegay in Xukuumaddiisa ay xoogga saari doonto sugida ammaanka iyo sidii kooxaha nabad diidka looga xoreyn lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada qaar.
“Dhawaan waxay ciidamada qalabka sida oo kaashanaya shacabka Koonfur Galbeed dib u furi doonaan wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Mas’uuliyiinta Koofur Galbeed, kuwa dowladda Federaalka iyo Hey’adaha sama falka ayaa diyaarad ku taga Baydhabo, waxaana dariiqa kaliya ee u furan ay tahay Hawada ah oo aanay dhulka ku safri karin.
Magaalada Baydhabo ayaa magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho u jirta 250KM, Wadada isku xirta labada magaalo Al-Shabaab ayaa horay u jaray, kaddib markii ay weeraro ka fuliyeen, waxaana dhowr jeer wadada u galeen Mas’uuliyiin iyo kolonyo ciidan ku safrayay wadadaas.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti iyo wafdi uu hoggaaminayo oo soo gaaray Muqdisho
Imaaraadka oo sheegay in saldhigga Militari ee Berbera ladhameynayo Juun